Iyo Russian Rumutsiridzo
Russian Revolution mabhuku
Russian Revolution chirevo #1
Russian Revolution chirevo #2
Russian Revolution chirevo #3
Russian Revolution chirevo #4
Russian Revolution chirevo #5
Russian Revolution chirevo #6
Russian Revolution chirevo #7
Zvinyorwa zveRussia Revolution
Mibvunzo yeRussia Rondedzero mibvunzo
ChiRussian Revolution mifananidzo
Russian Revolution Vanyori venhau
Mepu yeRussia Revolution
Mhedzisiro yeRussia Revolution ndangariro - zviitiko 1907-1916
Russian Revolution yekurangarira mibvunzo - zviitiko 1917
Mhedzisiro yeRussia Revolution ndangariro - zviitiko 1918-1924
Russian Rudzidziso ndangariro quiz - vashanduri
Russian Rudzidziso ndangariro quiz - tsarists
Russian Mhedziso ndangariro quiz: pfungwa (I)
Mhedzisiro yeRussia Yekuyeuka mibvunzo: pfungwa (II)
Mhedzisiro yeRussia Revolution ndangariro: zviitiko 1906 kusvika 1913
Mhedzisiro yeRussia Revolution ndangariro: zviitiko 1914 kusvika 1916
Russian Revolution yekurangarira mibvunzo: zviitiko kune 1905
Russian Revolution yekurangarira mibvunzo: mazano
Russian Revolution inorangarira inodzoka
Russian Revolution inodengenyeka
Russian Revolution makotesheni
Russian Revolution Misoro
Rumutsiridzo rweRussia ndiani
Russian Rumutsiridzo izwisearch - pfungwa
Russian Revolution izwisearch - vanhu
ChiRussian Revolution izwi rekuchengetera - nzvimbo
ChiRussian Revolution mazwi
Iyo Russian Rumutsiridzo chaive chiitiko chinokatyamadza icho chisina kungochinja nzira yeRussia, chakaumbawo zana re20th kutenderera pasirese.
Pakutanga kwezana 20th century, Rashiya yakanga iri imwe yemasimba makuru pasirese uye ane simba kupfuura vese. Iyo landmass yakatambanuka kubva kuEurope ichienda kuAsia uye yakatsemurwa chikamu chimwe muzvitanhatu chepasi. Vazhinji veRussia vakapfuura mamirioni e100, vachitora makumi emapoka emadzinza nemitauro. Uto rayo rimire parunyararo raive rakakura kupfuura zvese pasi.
Kunyangwe kukura kwayo kukuru uye nesimba, Russia yaive yakareruka sezvairi yemazuva ano. Humambo hweRussia hwaitongwa nemunhu mumwechete, Tsar Nicholas II, uyo akatenda masimba ake ezvematongerwo enyika chipo chakabva kuna Mwari. Mu1905, iyo Tsar simba rekuzvitonga rakapikiswa naro vanochinja zvinhu uye vanochinja zvinhu kutsvaga kugadzira democracy yemazuva ano Russia. Humambo hwekare hwakapona matambudziko e1905 - asi mazano nemauto aakasunungura haana kuparara.
Hondo Yenyika I yakashanda seyakanyandura shanduko muRussia. Kunge mamwe monarchie ekare eEurope, Russia yakapinda muhondo nechido uye isina kumbofunga nezvemhedzisiro. Ne 1917, iyo hondo yakanga yauraya mazana emamiriyoni eurombo, yakasimudza hupfumi hweRussia uye ikadzora rutsigiro rwakakurumbira rwe tsar nehutongi hwake.
Nicholas akabvisirwa masimba masimba uye akatsiviwa nehurumende yenguva pfupi - asi hutongi hutsva uhwu hwakatarisana nematambudziko ayo, sekuenderera mberi kwehondo nehondo nekukwira pakati pevekushanda. Yechipiri shanduko munaGumiguru 1917 yakaisa Russia mumaoko e Bolsheviks, radical socialists inotungamirirwa na Vladimir Lenin.
Lenin nemaBolsheviks vakarumbidza hunhu hwa Marxism uye akavimbisa nzanga iri nani yemakirasi anoshanda. Asi vaigona kukudza uye kuzadzisa izvi zvipikirwa? Lenin nehutongi hwake hutsva vanogona kugadzirisa mamiriro evashandi, ivo vachikunda kuparadza kwehondo nekukwevera Russia kupinda mune yanhasi?
Alpha Nhoroondo yeRussia Revhisi webhusaiti yakazara bhuku-remhando yezvinyorwa zvekudzidza zviitiko muRussia pakati pe1905 ne1924. Iyo ine anopfuura anopfuura 400 akasiyana epakutanga uye sekondari masosi, kusanganisira yakadzama misoro yenyaya, zvinyorwa uye mifananidzo inomiririra. Webhusaiti yedu inewo zvinyorwa zvekureva se map uye mamepu epfungwa, nguva, glossaries, a 'ndiani'uye ruzivo pa nhoroondo uye vanyori venhoroondo. Vadzidzi vanokwanisa zvakare kuyedza ruzivo rwavo uye nekurangarira nemhando dzakasiyana dzezviitiko zvepamhepo, zvinosanganisira mibvunzo, crosswords uye manzwi emashoko. Kwekutanga zvinyorwa parutivi, zvese zvirimo paAlpha Nhoroondo zvakanyorwa nevadzidzi vanokwanisa uye vane ruzivo, vanyori uye vanyori venhau.
Vanyori vezvakaitika kare
Iyi nzvimbo yeRussia Revolution ine zvinyorwa, zvinyorwa uye maonero ezviitiko muRussia pakati 1891 uye 1927. Ino saiti yakagadzirwa uye inochengetwa neAlpha Nhoroondo. Iyo ine 173,003 mazwi mune 276 mapeji uye yakagadziriswa kwekupedzisira munaAugust 3rd 2019. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanyira yedu FAQ peji kana Mashandisiro Ekushandisa.